မိတ်ကပ်မပါပဲပကတိရိုးရှင်းတဲ့ အလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ယွန်းယွန်းရဲ့ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးများ - Cele Platform
ကလေးသရုပ်ဆောင်အရွယ်ကတည်းကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်ခြင်းကို တောက်လျှောက်ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေး ယွန်းယွန်းကတော့ အခုဆိုရင်​ မင်းသမီးတစ်​ဦးအ​နေနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​​နေရပြီပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ယွန်းယွန်းက ကြော်ငြာရိုက်ကူးထားတဲ့ သူမရဲ့ အလှဓာတ်​ပုံ​လေး​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ အဝါရောင် တဘက်လေးနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတဲ့ ယွန်းယွန်းလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းနေတာပါနော်။
ချစ်​ပရိသတ်​​တွေ​အတွက်​ မြင်​သူတကာ ရင်​ကိုလှုပ်ခတ်သွားစေမယ့် ယွန်းယွန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်​​လေး​တွေကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ယွန်းယွန်းကတော့ “မျက်နှာအသားအရည်လေးကို ဂရုစိုက်ရမယ်မှန်းသိပေမယ့်လည်း Yoonလိုပဲ အချိန်အများကြီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်.. အချိန်အကုန်သက်သာပြီး သုံးရလွယ်တဲ့ Clean and Clear Facial Foaming Wash နဲ့ Toner လေးကို အားကိုးလို့ရတယ်နော်.. ဝက်ခြံတွေဖြစ်မှာလဲ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး!! ☺️☺️
Ps. ဒါကတော့ယွန်းရဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး skincare routine လေးပေါ့နော်.. Sisတို့ ရဲ့ skincareကိုရော ဘယ်လိုလုပ်လဲ? 😃” ဆိုပြီး အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှပေးထားတာပါ။
တစ်​​နေ့တစ်​ခြား ပိုပိုလှလာတဲ့ ယွန်းယွန်း​လေးကို​တော့ ပုရိသကိုကို​တွေကလည်း အရမ်းကို ​ကြွေ​နေကြတာပါ​နော်​။ ယွန်းယွန်းက​တော့ လတ်​တ​လောမှာ ဇာတ်​ကား​တွေ ဆက်​တိုက်​ရိုက်​ကူးဖြစ်​​နေပြီး တစ်​ခြား​သောအနုပညာအလုပ်​​တွေလည်း လုပ်​ကိုင်​ဖြစ်​​နေတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။
သရုပ်​​ဆောင်​ ပီပြင်​လွန်းတာ​ကြောင့်​လည်း က​လေးဘဝမှာကတည်းက အကယ်​ဒမီဆုကို ပိုင်​ဆိုင်​ခဲ့သ​လေးဆိုရင်​လည်း မမှားပါဘူး။ချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း တစ်​​နေ့တစ်​ခြား လှ​သွေးကြွယ်​လာတဲ့ ယွန်းယွန်း​လေးကိုချစ်​ရင်​ Share သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။ Source:Yoon Yoon’s Fcebook,CRD-MOMOLAY
ကလေးသရုပျဆောငျအရှယျကတညျးကနေ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျခွငျးကို တောကျလြှောကျရရှိခဲ့တဲ့ ခဈြစရာကောငျမလေး ယှနျးယှနျးကတော့ အခုဆိုရငျ မငျးသမီးတဈဦးအနနေဲ့ သရုပျဆောငျနရေပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာတော့ ယှနျးယှနျးက ကွျောငွာရိုကျကူးထားတဲ့ သူမရဲ့ အလှဓာတျပုံလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ အဝါရောငျ တဘကျလေးနဲ့ ကွျောငွာရိုကျကူးနတေဲ့ ယှနျးယှနျးလေးရဲ့ပုံရိပျတှကေတော့ အရမျးကို ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးနတောပါနျော။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မွငျသူတကာ ရငျကိုလှုပျခတျသှားစမေယျ့ ယှနျးယှနျးရဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ယှနျးယှနျးကတော့ “မကျြနှာအသားအရညျလေးကို ဂရုစိုကျရမယျမှနျးသိပမေယျ့လညျး Yoonလိုပဲ အခြိနျအမြားကွီးမပေးနိုငျဘူးဆိုရငျ.. အခြိနျအကုနျသကျသာပွီး သုံးရလှယျတဲ့ Clean and Clear Facial Foaming Wash နဲ့ Toner လေးကို အားကိုးလို့ရတယျနျော.. ဝကျခွံတှဖွေဈမှာလဲ စိတျပူစရာမလိုတော့ဘူး!! ☺️☺️
Ps. ဒါကတော့ယှနျးရဲ့အမွနျဆုံးနဲ့အလှယျကူဆုံး skincare routine လေးပေါ့နျော.. Sisတို့ရဲ့skincareကိုရော ဘယျလိုလုပျလဲ? 😃” ဆိုပွီး အရမျးခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ဝမြှေပေးထားတာပါ။
တဈနတေ့ဈခွား ပိုပိုလှလာတဲ့ ယှနျးယှနျးလေးကိုတော့ ပုရိသကိုကိုတှကေလညျး အရမျးကို ကွှနေကွေတာပါနျော။ ယှနျးယှနျးကတော့ လတျတလောမှာ ဇာတျကားတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးဖွဈနပွေီး တဈခွားသောအနုပညာအလုပျတှလေညျး လုပျကိုငျဖွဈနတော တှရေ့ပါတယျ။
သရုပျဆောငျ ပီပွငျလှနျးတာကွောငျ့လညျး ကလေးဘဝမှာကတညျးက အကယျဒမီဆုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့သလေးဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ခဈြပရိသတျတှလေညျး တဈနတေ့ဈခွား လှသှေးကွှယျလာတဲ့ ယှနျးယှနျးလေးကိုခဈြရငျ Share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ Source:Yoon Yoon’s Fcebook,CRD-MOMOLAY